7 Shirkadood Ee Aduunka Ugu Caansan Iyo Sida Ay Magacooda Ku Doorteen - Daryeel Magazine
Shirkadaha caanka ah ee sida Google, Yahoo, IKEA, Sony iyo kuwa kale oo badan waxay leeyihiin magac la wada garanayo balse aysan dadka badankoodu ogeyn sida ay ku doorteen. Halkaan waxaan ku soo bandhigaynaa qisada ka dambaysaa 10 shirkadood oo caan ah magacyadooda.
1. IKEA – Shirkada caanka ah ee laga leeyahay wadanka Sweden ee samaysa qalabka guryaha ayaa magaceeda waxaa ka dambeeya ninka lagu magacaabo Ingvar Kamprad oo ah ninkii aasaasay. Waxaa uu isku qabtay magaciisa koowaad iyo kan labaad IK iyo beertii uu ku soo koray oo lagu magacaabo Elmtayrd oo ku taala tuulada Agunnaryd oo isku noqonaysa EA.
2. Yahoo – Waxaa laga soo gaabay “Yet Another Hierarchical Officious Oracle”.
3. Google – Shirkada caanka ah ee xitaa hada magaceeda lagu daray qaamuuska ayaa magaceedu waxa uu ka soo jeedaa erayga “googol” oo ah eray loo isticmaalo xisaabta nambarka 1 ka dibna ay raacaan 100 zero.
4. Oracle – Waa shirkada samaysa barnaamijkada databaseka ee kombutarada. Magaceedu waxaa la sheegay in uu ka yimid mashruuc qarsoon oo ay lahayd CIA kaasoo uu qeyb ka haa ninka aasaasay Oracle ee lagu magacaabo Larry Ellison.
5. Skype – Barnaamijka caanka ah ee lagu wada hadlo ayaa magaciisa waxa uu ka yimid “Sky Peer-to-peer” iyadoo markii hore lagu magacaabi jiray Skyper balse markii dambe ay meesha ka saareen xarafka -r.
6. Amazon – Ninka aasaasay shirkadaan weyn ee lagu magacaabo Jeff Bezos ayaa la sheegay in uu doonayay in magaca shirkadiisa uu ka bilowdo xarafka A si markii liis la samaynayo magaca shirkadiisa looga bilaabo. Isagoo doortay magaca Amazon oo ah webiga aduunka ugu weyn maadaama uu doonayay in uu shirkadiisu ay noqoto mida aduunka ugu weyn.
7. Sony – Magaca Sony ayaa la sheegay in uu ka yimid erayga “sonus” oo luuqada Latinka lagu turjumi karo dhawaqa iyo erayga Sonny Boy oo sanadkii 1950 wadanka Japan loogu yeerijiray dhalinyarada soo jiidashada leh.
Su’aalaha Ugu Caansan Ee Waraysiga Shaqada Iyo Jawaabahooda Google Oo Ka Tallaabsatatay Shirkadda Apple Noqotayna Shirkadda Aduunka Ugu Qiimaha Badan Sida WhatsApp Loogu Isticmaali Karo Computer-ka Aduunka Ka Dooro Saxiib Wanaagsan, W/Q: Samsam Ismaciil